Ogaden News Agency (ONA) – Roobabkii oo Ka Curtay Gobolada Qaarkood iyo Warar Kale – Xarunta Dhex ee JWXO
Roobabkii oo Ka Curtay Gobolada Qaarkood iyo Warar Kale – Xarunta Dhex ee JWXO
Posted by ONA Admin	/ March 23, 2015
Roobabkii Guga ayaa meelo badan oo wadanka kamid ah sifiican uga curtay. Roobka oo aad loogu baahnaa ayay xogta laga helayo gobolada intaas kudaraya in ay roobabkanu ka curteen gobolo badan oo wadanka kamid ah sida Nogob, Jarar, Faafan iyo Qoraxay. Roobabka oo bilbilow ah ayaa lasheegayaa in aysan gobolada iyo dagmooyinka oo dhan wada gaadhin waxaase lasheegayaa in ay sifiican uga da’een qaybo kamid ah goboladaas aan kor kusoo xusnay.
Sida aan lawada socono raxmaddan Ilaahay ayay kunool yihiin dhacabka dhibaataysan ee uu gumaysigu ka xayiray dhamaan nolashii kale sida ganacsigii iyo shaqooyinkii kale waxaase jirta in aysan dadku abuuran karin dhulbeereedka uu Allaah wadanka ku manaystay sababo laxidhiidha gumaysiga oo aan ogolayn nolasha dadka.
Dhanka kale waxaa 21/3/15 magaalada jigjiga gacantooda isku dilay 2 sarkaal oo darajadoodu lagu sheego shaalaqe oo kamid ah Hawaarinta gabalkoodii dhacay ee uu gumaysigu siiyo daroogada si ay dadka shacabka ah ulaayaan. Labadan shaalaqe oo uu mid kasta isagu is dilay ayaa lagu soo waramayaa in lagu qasbay dagaalo iyo dhibaataynta shacabka iyagoo laga jaray sandareeradii yarayd ee loosiin jiray in ay ku xasuuqaan shacabka masaakiinta ah, arintaa ayaana ku kaliftay in ay gacantooda isku dilaan.
Dhinaca kale waxaa soo badanaya baxsiga iyo kala firxadka Hawaarinta iyagoo sanadihii iyo bilihii ugu dambeeyayba ay islayn iyo goosasho aan kala joogsi lahayn ka socotay xeryaha ay ku oodan yihiin. Arintan oo noqotay mid joogta ah ayay kuwii ugu dambeeyay ka goosteen dagmada Dhanaan, tuulada Dambarwayne oo Dhanaan katirsan iyo tuulada Kabtinaag oo Qabridahare katirsan waxaana lasheegayaa in ay goobahaas kabaxsadeen ciidan tiro badan oo meelo
kala duwan u kala goostay.
Waxaan helnay warar sheegaya inuu dagaal culus oo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo ciidanka gumaysiga ee niyada jabsan ku dhex maray duleedka Dagmada Qaridahare ee Xarunta Gobolka Qoraxay. Dagaalkan oo lasheegay in uu
ahaa weerar qorshaysan oo ay CWXO kuqaadeen ciidanka wayaanaha oo halkaas marayay ayaa ciidankii cadawga loogu gaystay khasaare naf iyo maalba leh oo aan wali lasoo faahfaahinin. Dagaalkan wixii war ah ee kasoo kordha iyo guud ahaan Ogadeniaayaad kala socon doontaan wakaalada wararka Ogadenia ONA.